KMF/Cnoe: « Aoka ho hentitra amin’ny fampananjana ireo fepetra » | NewsMada
KMF/Cnoe: « Aoka ho hentitra amin’ny fampananjana ireo fepetra »
Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny KFM/Cnoe, ny faran’ny herinandro teo, manoloana ny ady atao amin’ny Coronavirus. « Aoka ho hentitra tanteraka ireo tompon’andraikitra isan’ambaratongany amin’ny fampiharana sy ny fampanajana ireo fepetra fiarovana ho an’ny olom-pirenena mpitondra sy ny olom-pirenena entina », hoy izy ireo.
Fampidinana ny vidin-tsolika
Takin’izy ireo koa ny hanamaivanana ny olana sosialy ka sokafana kokoa ny ora fiasana ho an’ireo asa afaka manaja tanteraka ny fepetra. « Hampidinina ny vesatry ny vidim-piainana amin’ny alalan’ny fijerena manokana ny vidin-tsolika, indrindra manoloana ny fidinan’ny vidin’izany eo amin’ny iraisam-pirenena », hoy ny KMF/Cnoe. Nohitsin’izy ireo koa fa tokony hatao vaindohan-draharaha ny dengue sy ny tazomoka, efa namoizana ain’olona maro.
Tsindry sy fihantsian’i Frantsa
Etsy andaniny, tokony homanina dieny izao ny drafitra fanomezana aina sy ny fanarenana ny seha-pihariana rehetra.
Nialoha ireo, niantso firaisankina manoloana ny tsindry manoloana ireo firenen-dehibe. Tafiditra ao anatin’izany ny fihantsiana ataon’i Frantsa amin’ny fikasany hametraka valan-javaboahary amin’ireo Nosy manodidina.